China Ewube Gburugburu Azụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ewube Gburugburu Azụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ewube Gburugburu Azụ)
Ihe niile na otu ọkụ ọkụ 1. Nchebe ndi mmadu na ndi mmadu, ndi mmadu nwere ike ime gburugburu ebe obibi. 2.Otu jijiji, mgbochi mmiri, enweghị ntighari, enweghị ihe ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4.Ibu akwa ibe ya. 5.100% Ngwongwo na-agbanye ala aluminum. 6. Na-arụ...
100w gburugburu Post Elu ọkụ ọkụ
Bbier 100w Gburugburu Post Elu ọkụ ọkụ na -egbukepụ egbuke egbuke ma nwee nnukwu lumens irè 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a Post Top ikanam ìhè 100w nwere ezigbo heatsink imewe ezubere maka 50000 awa nke ndụ. Nke a 100w Gburugburu Post Top Diana kwesịrị ekwesị MEE 2-3 / 8 anụ ọhịa na 3 anụ ọhịa ahụ mfe...
75w Gburugburu Post Elu ọkụ
Bbier 75w Gburugburu Post Elu ọkụ ọkụ na -egbukepụ egbukepụ ọkụ na ịdị elu lumens irè 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a gburugburu Post Top LED ìhè nwere ezigbo heatsink imewe ezubere maka 50000 awa nke ndụ. Nke a 75w Gburugburu Post Top Diana kwesịrị ekwesị MEE 2-3 / 8 anụ ọhịa na 3 anụ ọhịa pole mfe...
50w Gburugburu Post Elu ọkụ ọkụ
Bbier 50w Gburugburu Post Elu ọkụ ọkụ na -egbukepụ egbukepụ ọkụ na ịdị elu lumens irè 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a gburugburu Post Top LED ìhè nwere ezigbo heatsink imewe ezubere maka 50000 awa nke ndụ. Nke a Gburugburu Post Top LED ìhè dị mma MEE 2-3 / 8 anụ ọhịa na 3 anụ ọhịa ahụ dị mfe iji wụnye...
30w Gburugburu Post Elu ọkụ ọkụ
Bbier 30w Gburugburu Post Elu ọkụ ọkụ na -egbukepụ egbugbere ọnụ ya na nnukwu lumens irè 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a gburugburu Post Top LED ìhè nwere ezigbo heatsink imewe ezubere maka 50000 awa nke ndụ. Nke a 30w Gburugburu Post Top Diana kwesịrị ekwesị MEE 2-3 / 8 anụ ọhịa na 3 anụ ọhịa ahụ dị...
50W Ogige Uhie A Na-achọ Ọhụụ Na-enwu Azụ
Bbier Anyanwụ Led Post Lights 50w nwere uto dị elu karịa ike ọkụ ndị ọzọ. Nke a Ala na-acha ọkụ ọkụ nke anyanwụ 50w nwere ike iru 145lm / w na 7,250lm. Nke a Solar Garden Oriọna nwere ike s upport ihe karịrị 10 ezo ụbọchị na nke kacha mma technology. Mgbasa ọkụ ihu igwe anyị ejirila ọrụ nlegharị anya na-arụ ọrụ iji...
ETL DLC 75W na-eme ka ìhè mpaghara gburugburu
ETL DLC 75W na-eme ka ìhè mpaghara gburugburu Ọ dịghị mkpa maka iji aka na-arụ ọrụ mere Post Top osisi ìhè dị ka ndị wuru na-mgbede ka chi ọbụbọ photocell achọpụta ìhè na-akpaghị aka na-agbanyụ ya na na na. Ẹkot na omenala 250W ìhè fixtures.Our 75W duru adọba ụgbọala oriọna enye gị ike ịrụ ọrụ nke ọma 9750lm super elu...
240W Gburugburu Ejiri Ogologo Ogologo Anya
Nke a High Bay Fixtures na- enye 5,000K CCT ìhè na 195,00 Lumens. Anyị na- enwu ọkụ na High Bay Ejiri ya na ibe di ndu nke ga-adi n'ime awa 50,000 nke ojiji na-aga n'ihu. Nke a Gburugburu Ejiri Akwa Mmiri Ndi ETL edeputara na enwere ike idozi ha na ebe ndi di egwu ma ha bia na ihe ndi agha nke afo ise. Ndị a...
25 Watt IP65 Mpaghara Gburugburu Ebe Ọdịda Anyanwụ
All ke kiet ke otu Solar Area Ìhè, anyanwụ panel bụ na top, ìhè bead bụ n'okpuru. 6-8 awa zuru ezu mgbe ebuchara, 3 ruo 7 Anụ ọkụ na-aga n'ihu. Ebe nchekwa anyanwụ Na-enwu gbaa ụtụtụ, bọtịnụ na-agbanye n'abalị, gbanyụọ na ụtụtụ ma malite ịkwụ ụgwọ. 25N Panelị nke anyanwụ maka Edozi Ala ruo 4000 lumens. Nke...
Ewube Gburugburu Azụ Ebube Gburugburu Ebube Gburugburu Mpaghara 75W Ewube Gburugburu Mpaghara Ebube Gburugburu Gburugburu Ebube Gburugburu Ebe Ederede Ebube Uzo Ochie Gburugburu Ebube Uzo Azuzu Gburugburu Ebe